Tsy Afaka Mifandray Sy Miantso Vonjy Ny Mponina Ao Sinay, Saikinosy Egyptiana Noho Ny Fahatapahan’ny Tambajotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2018 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, English, عربي, Italiano, English
Fihetsiketsehana manohitra ny fanapahana ny tambajotra finday tany Avaratr'i Sinay. Mivaky toy izao ny sora-baventy: “Tsy mila mampiasa ny tambajotra Israeliana izahay noho ny tandrevaka ataonareo.” Sary avy amin'ny Sinai2014/ pejin'ny vondrona SinaiOutofCoverage.
Nosoratan'i Asser Khattab ary navoaka tao amin'ny bilaogy SMEX ity lahatsoratra ity. Naverina navoaka eto amin'ny Global Voices indray izany ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanome baiko ny fanakatonana ny aterineto sy ny fitaovana fifandraisandavitra manerana ny faritra ny tafika Egyptiana tao anatin'ny hetsika miaramila hanafoanana ny “mpampihorohoro sy ireo vondrona ary fikambanan-jiolahy” any amin'ny Saikinosin'i Egypta any Sinai sy ireo faritra mifanila aminy.
Ity hetsika miaramila antsoina hoe “Bemidina Faobe: Sinay 2018” ity dia mikendry ireo mpikomy mpikambana ao amin'ny ISIS any amin'ny faritra avaratra sy afovoan'ny Saikinosin'i Sinay, any andrefan'ny Lohasahan'i Neily ary any amin'ny Vinany.
Nampaneno ny fanairana tao amin'ny Twitter ny mpikatroka antserasera sy ny olom-pirenena Egyptiana tamin'ny fampiasana ny tenirohy # سيناء_خارج_التغطية [ “Sinay nesorina tao anatin'ny rakotra“] mba hanehoan'izy ireo ny ahiahiny momba izay mety hanjo ireo mponina ao Sinay , satria sady ‘ tsy ahazoam-baovao viritoaly no tsy mivantana izy ireo amin'izao fotoana. Nanomboka tamin'ny volana Jolay 2013 no nanaovana ny Avaratr'i Sinay ho faritra miaramila fehezin'ny manampahefana Egyptiana, izay mandrara ny fidiran'ireo mpanao gazety sy ireo mpanara-maso ny zon'olombelona. Mponina an'arivony no noroahana sy nafindra toerana tamin-kerisetra raha sady nandrava ireo trano fonenana tamin'ny bulldozer ireo miaramila Egyptiana mba hanaovana faritra rindrin'afo fiarovana amin'ny sisintanin'i Gaza sy teo amin'ny seranam-piaramanidin'i Sinaï vao haingana.
Nahatonga an'i Sinay ho ao anatin'ny fahanginan'ny fampitam-baovao tanteraka ity hetsika miaramila goavana ity, amin'ny fanapahana ny fifandraisandavitra izay nahatapaka ny fifandraisan'ireo mponina ao aminy tamin'ny firenena sy izao tontolo izao ka nampitoka-monina azy ireo.
Nanjary fahazarana ho an'ny mponin'i Al-Arish sy ireo tanàndehibe hafa ny fanakanana toy izany any amin'ny faritra avaratr'i Sinay vitsy mponina izay iharan'ny fanelingelenana ara-tambajotra “isaky ny misy ny fanatontosana hetsika fiarovana sy bemidina miaramila any amin'ny tany efitra any atsimon'ny tanàndehibe,” hoy ny injeniera iray tsy nitonona anarana ao al-Arish, noho ny fahatahorana ireo manampahefana. Nanampy ilay loharanom-baovao fa tsy nampandre ny mponina mialoha ny governemanta talohan'ny fanapahana ary tsy nanome fanazavana momba izany rehefa niverina ny tambajotra.
Nanao fanafihana ny fikomiana tao Sinay ny governemanta Egyptiana hatramin'ny nanombohan'izany tamin'ny taona 2011, taorian'ny zava-nitranga nandritra ny revolisiona Egyptiana izay nanonganana ny fitondran'ny Filoha Hosni Moubarak. Nanafika ny mpitandro ny filaminana Egyptiana imbetsaka ny vondrona mpikatroka mahery fihetsika Ansar Beit al-Maqdis (ABM) talohan'ny nanaovany fankatoavana tamin'ny Fanjakana Islamika tao amin'ny Saikinosin'i Sinay, nantsoina ho faritany ISIL-Sinai.
Nilaza tamin'ny SMEX i Mohannad Sabry, mpanao gazety sady mpikaroka izay tena nandrakotra an'i Sinay nandritra ny antsafa an-telefaonina fa tsy nahomby ny fanakanana ny fifandraisandavitra sy ny aterineto
“Ireo tafi-panjakana no tena nijaly kokoa noho ireo mpikomy tamin'ny fanelingelenana ny tambajotra”, hoy izy, raha nilaza ny toe-draharaha nahitana ireo tafika an-tanety tsy afaka nifandray na tamin'ny samy izy ireo izany na tamin'ny minisiteran'ny atitany nandritra ny ady. “Nanana fitaovana hafa hifandraisana, toy ny tambajotra BGAN [telefaonina mandeha amin'ny tambajotran'ny zanabolana] sy ireo talkie walkie amin'ny maridrefy fohy” ireo vondrona mpikomy, hoy i Sabry, raha sady nanazava izy fa tsy nisy fiantraikany firy tamin'ireo voalaza fa nokendrena ny fanelingelenana ny tolotry ny fifandraisandavitra.
Nanakana ny mpanao gazety tany an-toerana sy ny vahiny ary ny fikambanana tsy miankina hifandray tamin'ireo loharanom-baovaony teny an-kianja ireo fanakanana ireo.
” Anisan'ny anton'ireo fanelingelenana ny famerana ny fandrakofana ny tsy fahombiazan'ny tetikady Egyptiana tao Sinay sy ny fiantraikan'izany teo amin'ny vondrom-piarahamonina “, hoy i Sabry.
Ny 3 Febroary, nanambara ny New York Times fa nisy ny “fifanarahana miafina” nataon'i Egypta sy Israely mba hanoherana ireo mpitolona any avaratr'i Sinay. Niezaka nanafina izany vaovao izany ampahibemaso ny governemanta Egyptiana, araka ny filazan'i Sabry, “nikasa ny hanafina ny fankatoavana ny fanafihana an'habakabaka Isiraeliana natao tamin'ny Fanjakana Islamika tany Sinay ny mpitondra Egyptiana,” hoy izy.
Tantanan'ny Manampahefana Nasionaly Amin'ny Fandrindrana ny Fifandraisandavitra (NTRA) ny sehatry ny fifandraisandavitra ao Egypta ary “midika izany fa mandray anjara amin'ny fanakorontanana ny tambajotra rehetra ao amin'ny firenena ity andry ity,” hoy ity mpitolon'ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny SMEX ity izay tsy nitonona anarana mba ho fiarovana ny tenany manokana .
“Sampan-draharaha maro ao amin'ny Fanjakana no mitsabaka amin'ny asan'ny NTRA, toy ny Minisiteran'ny Fiarovana sy ny Atitany, ny Sampan-draharaha misahana ny Filaminam-Pirenena sy ireo maro hafa tahaka ny Minisiteran'ny Fifandraisandavitra,” hoy ihany ilay mpikatroka.
Noho ny fandrahonan'ny fitondrana miaramila tarihan'ny Filoha Abdel Fattah El-Sissi ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalaham-pitenenana no mahatonga indray ny fitsabahana amin'ny tolotry ny fifandraisandavitra sy ny aterineto. Tamin'ny taona 2016, firenena fahatelo eto amin'izao tontolo izao amin'ny resaka fanagadrana mpanao gazety i Egypta araka ny filazan'ny komity miaro ny mpanao gazety.
Mbola sarotra kokoa ny fanaovana tatitra any Avaratr'i Sinay hatramin'ny nanambarana ilay faritra ho faritra voatokana ho an'ny miaramila sy tsy azon'ireo mpanao gazety idirana tamin'ny volana Jolay 2013. Araka ny loharanom-baovao tany Al-Arish, raha toa ka afaka nangataka alalana avy amin'ny mpitondra enin'ny tafika Ejiptiana, Tamer al-Refai hiditra ny faritra ny mpanao gazety, “dia zara raha nomeny izany alalana izany… tsy nisy olona navela hanoratra momba ny zava-nitranga na nanoratra tantara hafa manan-danja [ho an'ny mponina ao Sinay]. “
Nilaza ilay injenieran'i Al-Arish raha nanontaniana momba ny fisian'ny fikambanana miaro ny zon'ny mponina amin'ny fidirana amin'ny aterineto sy ny tolotry ny fifandraisandavitra fa : “Tsy misy mihitsy izany, tsy misy ny manao izany… voafetra tahaka ny an'ny asa fanaovan-gazety ny asan'ny ONG eto.”
Nilaza i Sabry fa ireo mponina ao an-toerana any avaratr'i Sinay no tena niharam-boina tamin'ity fanelingelenana ity satria “tsy afaka nampandre ny trangana fahafatesana vokatry ny fanafihana na ny ratra mahazo azy ireo izy ireo ary voafetra ny fidiran'izy ireo amin'ny tolotra vonjy taitra”.
“Vehivavy maro nihetsi-jaza no tsy afaka niantso fiara fitaterana marary”, hoy hatrany izy .
“Ny tratran'ny tsy ampoizina no tena ratsy indrindra” ho an'ny mponina tahaka ny loharanom-baovaonay any Al-Arish, izay voakasika mivantana tamin'ny fanakanana. Tsy afaka mamantatra momba ny fahafatesan'ny havany ny olona sasany ary adiny 10 na adin'ny 12 ora aty aoriana vao misy mampahafantatra momba izany izy ireo. Ireo hafa indray dia tsy maintsy mandeha dia lavitra, hatramin'ny 90 kilometatra, mba hanaovana antso an-telefaonina na handefasana mailaka.
Olana nasionaly ao Egypta ny fanakanana na ny famerana ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao sy ny tolotra fifandraisandavitra izay miitatra hatrany amin'ny Saikinosin'i Sinay. Nanakana farafahakeliny tranonkala miisa 496 ny governemanta Egyptiana hatramin'ny 24 May 2017, araka ny Fikambanana ho an'ny fanehoan-kevitra malalaka sy ny Fahalalaham-pitenenana, izay orinasan'ny mpisolovava tsy miankina.
Voasakana ny tranokalan'ny fikambanam-baovao iraisampirenena maro, toy ny Washington Post sy ny fampahalalam-baovao tsy miankina ao an-toerana, toy ny Mada Masr. Noho ny filazana fa manohana ny asa fampihorohoroana sy ny fahafenoan'ny “vaovao faikany” ao aminy dia tsy nahazo tolotra sy fampahalalam-baovao manan-danja ny vahoaka Egyptiana raha iharan'ny fanafihana hatrany kosa ny asan'ireo mpanao gazety ao an-toerana .